Ho tombontsoan’iza anefa? | GAZETY_ADALADALA
Ho tombontsoan’iza anefa?
Posted on 08/08/2009 by gazetyavylavitra
Tsy dia niresaka ny ara-politika loatra aho tato ho ato izay, ary tsy afaka nandrakotra an-tsary ny zava-niseho tetsy sy teroa ihany koa, indrindra fa izay nitranga androany, noho ny ara-pahasalamana.
Reko ihany anefa na dia izany aza fa nisy fifanandrinan’ny mpitandro filaminana sy ny mpomba an-dRavalomanana teny akaikin’ny Jesosy Mamonjy Ankorondrano teny androany.
Raha ny fandinihako azy tato ampandriako tato, ampifandraisiko amin’ny vaovao azoko, dia mety ho nisy fifandraisany tamin’ny fampitam-baovao mivantana (an-telefaonina) nataon’ingahy ALAIN RANDRIANASOLO (mpiasan’ny RNM) izay toe ‘hoe any Maputo angaha ilay izy. Eritreritro fotsiny ny hoe mety misy fifandraisany satria ilay rangahy io no nilaza mivantana tamin’ny mponin’i MAGRO, hono, fa hoe nahazo ‘amnistie’ i Ravalomanana ary hody androany ihany aty Madagasikara.
Liliane Andriambololona (mpiasan’ny TVM) anefa avy any Maputo nampita mivantana fa tsy misy mihitsy aloha hatreto olona mahazo vaovao (toy izany koa no ambaran’i Lova Rabary-Rakotondravony) momba ny dinik’ireo chef de file any Maputo, satria mihidy aman-trano izy ireo mitady ny marimaritra iraisana. Samy milaza ny tsy hanao sonia ny ankolafy roatonta (Andry Rajoelina sy Ravalomanana) mifanandrina raha tsy tanteraka izay tadiaviny.
i Andry Rajoelina tsy manaiky velively ny hodian’ingahy Ravalomanana, Ravalomanana tsy manaiky fa tsy maintsy tafiditra aty Madagasikara, ny ankolafy Didier Ratsiraka sy Zafy albert samy tsy misy te-hiditra amin’y pataloha tery.
Koa ‘lainga’ ho tombontsoan’iza ary no nataon’ingahy ALAIN RANDRIANASOLO (RNM) raha tena lainga tokoa.
Hoy ny ankolafy Zafy Albert:
…mieritreritra izahay fa tsy mitondra vahaolana ny fiverenan’ingahy Ravalomanana any Madagasikara izao dieny izao…Ny fiverenany any aza no mety vao miha hahasarotra ny fitadiavana vahaolana…
Onitiana Realy (TVPlus):
Efa mandinika ‘charte’ miaraka amin’ny mpahay lalàna avy amin’ny ankolafy tsirairay ny chef de delegation tsirairay ny amin’ny fizarana seza ao anatin’ny ‘Transition’…Tsy mbola fantatra araka izany raha hisy na tsia ny sonia ho vita androany…(mivantana avy any Maputo).
Ekena fa sarotra ity asa ‘mampita vaovao’ ity. Saingy ny mpanao gazety dia tokony hilaza ny zavatra hitany aloha, vao mitondra ‘commentaires’ avy eo. Koa loharanom-baovao avy taiza ary no nitrandrahan’ingahy ALAIN RANDRIANASOLO ny vaovao nampitainy ho an’i MAGRO. Satria amiko dia misy lalao politika ao ambadik’izany, ary fanohintohinana ny filaminana anatin’ny firenena. Fa dia somadodoka, hono, ny tao amin’ny MAGRO androany nandray an’izay vaovao izay ary dia efa naseho tao daholo koa,hono, ny filohan’ireo fikambanana tanora handray andraikitra ny fanomanana ny fitsenana an’i ‘dada’.
Nanao fanambarana mihitsy moa ny talen’ny RNM fa tsy nandefa an’ingahy ALAIN RANDRIANASOLO hamita iraka any Maputo izany, ary ny loharanom-baovao ofisialin-dry zareo dia i Liliane Andriambololona avy amin’ny TVm.
‘Ndeha hataontsika hoe olona manao sangy ratsy no nangalatra ny feon-drangahy iny ka mampisavoritaka ny saim-bahoaka – Enga anie -. Mila mailo ihany anefa ny Malagasy mba tsy ho tratry ny vela-pandriky ny te-hametraka korontana eto amin’ity Madagasikara ity. Fa tena toa lasa raharaha MAPUT(o)ahotra izy ity
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany | Tagged: alain randrianasolo, Andry RAJOELINA, didier ratsiraka, liliane, maputo, Ravalomanana, RNM, TVM, zafy albert |
« Nisy nanafika ny VIVA Ambodivona Dimy volana lasa izay no nandosiran-dRavalomanana Marc »